Shirka Archives - Sawirrotv
Tag Archive for: 'Shirka'
Madaxweynaha Dowladda Federaalka ee Soomaaliya Mudane, Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa maanta kulamo gaar gaar ah la qaatay qaar kamid ah Madaxda ka qeybgalaysay Shir-Madaxeedka Ururka Midowga Afrika ee ka dhacaya Magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. Madaxweyne Farmaajo ayaa Shirar gooni gooni ah la yeeshay Madaxweynaha dalka Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle, Madaxweynaha Suudaan, Cumar …
Qaabka loo Marayo Shirka dib u Heshiisiinta Qaran oo Maanta Muqdisho ka Furay (SAWIRRO)
Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Dowladda federaalka ahna ku simaha Ra’iisul Wasaaraha dalka, Mudane Mahdi Maxamuud Guuleed ayaa maanta si rasmi ah u daah rogay qaabka loo marayo Shirka dib-u-heshiisinta qaran. Shirkani ayaa waxaa ka soo qayb galey Wasiirka Wasaarada Arimaha Gudaha iyo dib u hushiisiinta Soomaaliya, Qaar kamid ah madaxda dalka, Xubno ka socdey Maamul …
Madaxweyne Farmaajo oo Maanta u Duulay Magaalada London, Raacayna Diyaarad Shacab (VIDEO)
Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde International magaalada Muqdisho. Madaxweynaha iyo wafdigii la socda ayaa raacay Diyaarada Turkish Airline ah, taasi oo ay sidoo kale raaceen dad shacab ah oo ku sii jeeday dunida dacaladeeda, waxaana Madaxweynaha iyo Wfadiga la socda dalka Turkiga …
Faysal Cali Waraabe oo ka Qayliyay Cuna Qabataynta Hubka ee Laga Qaadayo Soomaaliya (VIDEO)
Gudoomiyaha Ururka Siyaasadda ee Ucid injineer Faysal Cali Waraabe ayaa ka qayliyaya suurtagalnimada in markani dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku guulaysasn karto in laga qaado cuna qabataynta hubka ee iminka saaran. Faysal Cali Waraabe ayaa shaaciyey in Somaliland ay qatar horlahi ay soo wajahday, kuna baaqay inay dowladda Siilaanyo ay Hub soo iibsato, si …
Shir Hordhac u ah kan ka Furmaya Magaalada London oo Maanta Lagu Qabanyo Muqdisho
Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa waxaa maanta lagu wadaa inuu ka furmo kulan horudhac u ah shirka Bishan gudaheeda ka furmaya Magaalada London ee dalka Ingariiska. Shirkan oo ay ka qeyb-galayaan mas’uuliyiinta dowladda Federaalka ah, dowla goboleedka, bulshada rayidka ah, qurbajoogta, beesha caalamka iyo dad kale ayaa lagu wadaa in ay ka soo …